I-imeyile yokujonga ngamehlo iyaqhubeka nokuqhubela phambili nge-SmartFOCUS | Martech Zone
I-imeyile yokujonga ngamehlo iyaqhubeka nokuqhubela phambili nge-SmartFOCUS
NgoLwesine, Aprili 14, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, ndandisebenza kwinkampani enkulu ebizwa I-ASTECH InterMedia eDenver, eColorado. Inkampani yayiyeyona nkampani inkulumbuso yokuthengisa kwindawo yokugcina ulwazi kwishishini lephephandaba kwaye iqhutywa ngumntu omkhulu (kunye nomhlobo) UTom Ratkovich. Emuva xa i-tera yayingekho kwisigama, sasiyila kwaye sakha indawo yokugcina idatha ye-terabyte yamanye amaphephandaba amakhulu ehlabathini.
Kwakuyixesha elimangalisayo kwaye kwakhokelela ekubeni ndiye e-Indianapolis ukuyila, ukuphuhlisa nokumilisela ubuchwephesha bokuthengisa kwiziko ledatha lephephandaba lengingqi. Sasisebenzisa isixhobo esibizwa ngokuba yi-SmartFOCUS Viper kwiphephandaba, ngenkampani Inkqantosi. Ngobambiswano, uBruce Taylor wasePraesage wakha izixhobo zekhaya kunye nezokukhangela ezazingaphandle kweli lizwe… kwaye baqhubele phambili ukuza kuthi ga ngoku.
Izixhobo zazihambele phambili kangangokuba ndaqhagamshelana noTom ndamxelela ngazo… andazi ukuba kuza kwenzeka ntoni emva koko! Inkampani kaTom yamkele izixhobo zikaPraesage kwaye yathumela iSmartFOCUS kubaxhasi bayo. I-ASTECH InterMedia emva koko yathengwa yi-SmartFOCUS-inkqubela phambili enkulu kumzi mveliso wase-US.
Kwiminyaka eyadlulayo, ngobudlelwane kunye neengcali zeshishini, inkampani yethu yasebenza ne-imeyile ye-imeyile. Umbono nge-imeyile ngu Umboneleli ngenkonzo weimeyile jikelele Ngubani owandisa unyawo ngaphezu kwe-imeyile kunye neselfowuni. Kuthengwe kutshanje Injongo yeMarketer ukuntywila kumzi mveliso weendaba zosasazo ngeqonga elikhulu lokushicilela kwezentlalo kunye neqonga lokulinganisa.
Ngoku, i-imeyile yokuThenga uthenga i-SmartFOCUS. Olu ludibaniso! I-SmartFOCUS ikakhulu ibikukufaka isicelo somthengi / umncedisi kodwa kutshanje ibhengeze iSoftware njengemodeli yeNkonzo. Ukuba unamava kwizixhobo zabo zexesha elidlulileyo, ndinokukuxelela ukuba nje ukuba ezi zinto zingeneyo kwimakethi ye-SaaS, kukutshintsha komdlalo kolu shishino. I-SmartFOCUS isebenzise ukurhuqa kunye nokulahla abakhi bemibuzo yesitayile seVenn abenze intengiso yolwazi oluphambili ngokulula ngokulula. Idityaniswe neenkalo ezibaliweyo, iqonga lalilelona lifanelekileyo kushishino, kwaye indawo yogcino lwedatha yayikhawuleza kunayo nayiphi na enye indawo yolwazi endakha ndayisebenzisa.
I-imeyile yokujonga ngoku ngoku inobudlelwane obunzulu kwihlabathi liphela kunye namashishini okuthengisa aphambili. Bebesele benentengiso ye-imeyile kunye neqonga lokuthengisa eliphathwayo elalilungiselelwe ukusetyenziswa kwe-ecommerce… oku kudityaniswa kunye nokufunyanwa kuya kubonelela ngetekhnoloji kunye nezixhobo zabantu ezinokubenza babe zezona zixhobo zinobuchule kwezentengiso ezikrelekrele emhlabeni.
Nantsi ividiyo yakutshanje evela kwiqela elikwi-imeyile ye-imeyile, kulungile ukubona ukuba basonwabile!
Lihlabathi elikhulu, kodwa kuyamangalisa ukuba zingaphi iindawo zonxibelelwano endinazo eziqhubeka nokuvela ngaphezulu kobomi bam. Ndijonge phambili ekuqhubekeni ndisebenza nazo zonke ezi nkampani kunye nabantu abalungileyo!
I-53% yokutshintsha uhlahlo-lwabiwo mali lushicilelwe uye kuPhando kunye noLuntu
Epreli 15, 2011 ngo-8: 17 AM
Iposti enkulu uDoug. Ndiyavuya ukuba uyithandile le vidiyo nawe – lindela okungakumbi kwixesha elizayo. 🙂